Samsung Galaxy Fold na-enweta otu UI 3.1 melite | Gam akporosis
Samsung na-agbasawanye mmelite nke Otu UI 3.1 maka etiti na oke elu mobiles gi. Oge a ka ọ bụ oge nke mpịachi ekwentị Fold Galaxy iji nata ya, yabụ ndị ọrụ nke ekwentị a kwesiri inwe ya maka nbudata na ntinye.
Mmelite a na-apụ apụ maka nkeji ekwentị niile n'oge a zuru ụwa ọnụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọgaghị adị na mba ụfọdụ dịka a ga-eji nke nta nke nta nye ya. Nke a rutere site na OTA ma nwee ọtụtụ ndozi na ozi ọma.
Otu UI 3.1 melite na-abata Samsung Galaxy Fold
Ngwunye ngwa ngwa ọhụrụ maka Galaxy Fold nke na-abịa na One UI 3.1 na-eburu nọmba ụlọ ahụ F900FXXU4EUBF e mejuputa ihe nchebe nke March.
OTA na-agbakwunye obere nkwalite na ngwaọrụ gụnyere ụdị igwefoto ọhụrụ, Share Share, na Eye Comfort Shield, nke a na-akpọbu Blue Light Myọcha. N'aka nke ya, ọ na-abịa na ndozi ahụhụ dị iche iche, mmụba nke usoro sistemụ na ọtụtụ njikarịcha maka ahụmịhe onye ọrụ ka mma.
Dị ka nyocha, anyị na-ahụ na Galaxy Fold bụ ngwaọrụ na-emegharị ihe nwere 7.3-inch Dynamic AMOLED ihuenyo na mkpebi FullHD zuru oke nke pikselụ 1,536 x 2,152. Nke abụọ ihuenyo bụ 4.6 sentimita asatọ na Super AMOLED technology na HD + mkpebi nke 720 x 1,680 pikselụ.
Chipset processor na ebi na obi nke ngwa a bu Qualcomm's Snapdragon 855, ebe ejiri 12GB RAM tinye ya na ebe nchekwa 512GB. Enwekwara batrị 4.380 mAh nke ejiri Wred 15 ngwa ngwa na 15 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa.
Usoro igwefoto azụ nke ngwaọrụ a dị okpukpu atọ ma nwee ihe mmetụta 12 MP, ihe ntanye 16 MP sara mbara na 12 MP telephoto. Igwefoto onwe onye dị okpukpu abụọ 10 + 8 MP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy Fold Na-enweta Otu UI 3.1 Mmelite
Etu esi eji ngwa abụọ n'otu oge na ekwentị Xiaomi